Kedu mmegha ahụ na ntụgharị uche nke chromatic na-emetụta ima.files - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Edemede Gwa ndị ahịa
RIY igwefoto oblique
Ihe oyiyi dị elu ， dị ike ma nwee ntụkwasị obi maka ịme ngosi 3D
D2M / DG3M Mpempe anya mpịachi igwefoto 3D usoro nhazi
D2Pros —— Kasị mma multi-rotor drone oblique igwefoto
D2 / D3 —— Kachasị kpochapụwo multi-rotor drone oblique igwefoto
DG3 —- Igwe ọkụ APS-C drone oblique pere mpe nke pere mpe
DG3Pros —— Kacha mma APS-C drone oblique igwefoto
DG4Pros —— Kachasị mma zuru-okpokoro okpokoro igwefoto
RIS igwefoto oblique
ọkụ na obere accuracy ziri ezi maka foto eserese nke ikuku
RIE ese foto otu anya
Ọkachamara na oke-ziri ezi otu-lens nkewapụta igwefoto
Obere ngwa ， nnukwu ihe
AP-1 Parameter-Gbanwee Module
HS Data-Nchekwa Modul
Igwe nyocha foto igwe na Sky-filter
Igwe nyocha data Sky-scanner
Sky-lekwasịrị anya AT Ọrụ Ọrụ
RIY igwefoto oblique RIS igwefoto oblique RIE ese foto otu anya
N'IHI gịnị RAINPOO
Onye na-eme igwefoto kacha buru ibu nke China Tọrọ ntọala na 2015, rainpoo na-elekwasị anya na oblique
Mma karịa lighter
Onye mbu weputara igwefoto elekere ise n’ime 1000g (D2) ， mgbe ahu DG3 (650g), mgbe ahu DG3mini (400g).
Otu igwefoto, anya ise. Mwekota a na - enye gị ohere ịnakọta foto site na echiche ise n'otu ụgbọ elu.
Mụọ ọrụ na nkeji 10
Dị modular na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịmụta otu esi etinye ma jiri igwefoto.
Ọdịdị dị elu na izi ezi
Onwe ha mepụtara ngwa anya lens.Built-na Double Gauβ na ụma low dispersion Aspherical lens
Ngosipụta oge-ọdịiche nke anya m ise erughị 10ns.
Siri ike na nchebe
Shei mere nke magnesium-aluminom alloy na-eji na-echebe ndị dị mkpa anya m, na n'ihi na
Enwere ike ijikọ ya na ọtụtụ ụdị drones
Ma ọ bụ multi-rotor UAV, a ofu nku drone, ma ọ bụ a VTOL, anyị ese foto nwere ike ike na ha na f ...
Nyocha / GIS
Nyocha ala ， Cartography ， Topographic ， Cadastral nyocha ， DEM / DOM / DSM / DLG
GIS ， Atụmatụ obodo ， Digital city- management registration Ndebanye aha ụlọ
Mwube / Ngwuputa
ịrụ ọrụ ụwa, ịlele olu ， nchekwa-nlekota
Tourism / Ancient ụlọ nchedo
3D sinik ntụpọ ， obodo mara mma ， 3D-ọmụma anya
Ndị agha / ndị uwe ojii
nwughari mgbe ala ọma jijiji ， Nchọpụta na nwughari nke mpaghara mgbawa area Mpaghara ọdachi m ...
- GYN RA mere RAINPOO
- Ọrụ Ọrụ
- Gbasara Anyị
- Gwa ndị ahịa
Nkwado nke mba ofesi:+8619808149372
Kedu otu afọ ime na agbagọ na emetụta ima.files
1.chromatic ime ihe
1.1 Gini bu mmeko chromatic
Ngwunye chromatic na-akpata site na ọdịiche dị na transmissivity nke ihe ahụ. A na-ejikọ ọkụ dị na mpaghara mpaghara ọkụ a na-ahụ anya nke nwere ogologo nrịgo nke 390 ruo 770 nm, ndị ọzọ bụ ụdịdị dị iche iche nke anya mmadụ enweghị ike ịhụ. Ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ nwere ntụgharị ntụgharị dị iche iche maka ogologo ntụgharị nke agba agba, ọkụ agba ọ bụla nwere ọnọdụ ntanetị na ịdị ukwuu, nke na-ebute chromatism nke ọnọdụ.
1.2 Kedu ka mmebi chromatic si emetụta ogo onyonyo
(1) N'ihi ntụgharị dịgasị iche iche na ntụgharị ntụgharị nke agba dị iche iche nke ìhè, isi ihe ahụ enweghị ike ịdabere nke ọma na otu akara ngosi zuru oke, yabụ foto ahụ ga-acha.
(2) Ọzọkwa, n'ihi mmụba dị iche iche nke agba dị iche iche, a ga-enwe "ahịrị egwurugwu" na nsọtụ nke isi ihe oyiyi.
1.3 Kedu ka mmebi chromatic si emetụta ụdị 3D
Mgbe isi ihe oyiyi nwere "akara egwurugwu", ọ ga-emetụta ngwanrọ ngwanrọ 3D iji kwekọọ n'otu-isi. Maka otu ihe ahụ, nha nke agba atọ nwere ike ibute njehie n'ihi "akara egwurugwu". Mgbe njehie a gbakọtara nke ukwuu, ọ ga - ebute "stratification".
1.4 Otu esi ewepu oria chromatic
Ojiji nke ndekota ntụgharị dị iche na mgbasa dị iche iche nke iko iko nwere ike iwepu mmechi nke chromatic. Dịka ọmụmaatụ, jiri obere ihe ntanye na obere iko a na-agbasasị dị ka lenses convex, na ntinye ntụpọ dị elu na iko dispersion dị elu dị ka lenses concave.
Anya dị otú ahụ jikọtara ọnụ nwere mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ karịa n'etiti etiti na ogologo ntụgharị dị ogologo na ụzarị ogologo na mkpụmkpụ. Site na imezi oghere nke oghere, oghere mgbado anya nke acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara nwere ike ịha nhata, nke na-ewepụ mmebi chromatic n'ụzọ bụ isi.
Secondary ụdịdị dị iche iche
Mana enweghi ike iwepu aberụ chromatic. Mgbe iji lens jikọtara, a na-akpọ aberration chromatic fọdụrụ "ụdịdị dị iche iche nke abụọ". Ogologo oge ogologo nke oghere ahụ, aberration chromatic ka fọdụrụ. Ya mere, maka nyocha nke ikuku nke chọrọ nha doro anya, enweghị ike ileghara ụdị nke abụọ anya.
Na tiori, ọ bụrụ na enwere ike kewaa eriri ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha akwụkwọ ndụ na-acha ọbara ọbara-na-acha uhie uhie, na usoro achromatic na-etinye aka na etiti abụọ a, enwere ike iwepụ usoro nke abụọ. Agbanyeghị, egosiputala na ngụkọta oge na ọ bụrụ na achromatic maka ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọkụ uhie, chromatic aberration nke acha anụnụ anụnụ na-aghọ nnukwu; ma ọ bụrụ na achromatic maka-acha anụnụ anụnụ ìhè na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ìhè, na chromatic aberration nke-acha uhie uhie ìhè na-aghọ nnukwu. Ọ dị ka nke a bụ nsogbu siri ike ma enweghị azịza ya, enweghị ike wepu ya kpamkpam.
Ọ dabara nke ọma, usoro nyocha achọpụtala ụzọ maka APO, nke bụ ịchọta ihe ngosi anya oghere pụrụ iche nke mgbasa ozi nke acha anụnụ anụnụ na ọkụ na-acha uhie uhie dị obere na nke acha anụnụ anụnụ na ọkụ ọkụ dị oke elu.
Fluorite bụ ihe dị iche iche dị otú ahụ, mgbasa ya dị oke ala, akụkụ nke mgbasa mgbasa ahụ dị nso na ọtụtụ iko anya. Fluorite nwere obere ndọtị na-adịghị mma, ọ bụ ntakịrị soluble na mmiri, ma nwee usoro na-adịghị mma na nkwụsi ike kemịkal, mana n'ihi njirimara achromatic ya dị mma, ọ na-aghọ ihe ngwa anya dị oke ọnụ ahịa.
Enwere ezigbo fluorite dị ole na ole enwere ike iji maka ngwa anya na okike, yana ọnụahịa ha dị elu na nsogbu na nhazi, lenses fluorite abụrụla otu lens dị elu. Ndị na-emepụta oghere dị iche iche etinyela mgbalị ọ bụla iji chọta ndị ọzọ maka fluorite. Igwe fluorine-okpueze bụ otu n'ime ha, na iko AD, iko ED na iko UD bụ ndị ọzọ.
Igwefoto oblique Rainpoo na-eji iko dị oke ala dị ka oghere igwefoto iji mee ka aberration na distortion dị obere. Ọ bụghị naanị na-ebelata ihe puru omume nke stratification, kamakwa mmetụta ụdị 3D enweela mmụba nke ukwuu, nke na-eme ka mmetụta nke nkuku ụlọ na facade dịkwuo mma.
2 、 Nsogbu
2.1 Gini bu agbaghari
Lens distortion bụ n'ezie okwu izugbe maka ntụgharị okwu anya, ya bụ, ngọngọ kpatara site n'echiche. Kinddị agbagọ a ga-enwe mmetụta dị njọ na izi ezi nke eserese. A sị ka e kwuwe, ebumnuche nke eserese bụ iji mụta nwa, ọ bụghị ikwubiga okwu ókè, ya mere achọrọ na foto kwesịrị igosipụta ezi ọkwa nke ala atụmatụ dịka o kwere mee.
Mana n'ihi na nke a bụ njirimara ebumpụta ụwa nke oghere (oghere convex na-agbanwe ọkụ na oghere concave na-agbanwe ìhè), mmekọrịta a gosipụtara na ngwa anya bụ: ọnọdụ tangent maka iwepu agbagọ na ọnọdụ sine maka iwepu coma nke diaphragm enweghị ike afọ ojuju na n'otu oge ahụ, ya mere agbagọ na ngwa anya chromatic aberration Otu ihe a enweghị ike iwepụ kpamkpam, ọ ka mma.
Na onu ogugu di n’elu, enwere nmekorita nke di n’etiti onyonyo na elu ihe, ihe ruru n’etiti ha abuo.
N'ime usoro onyonyo dị mma, a na-edobe anya dị n'agbata ụgbọelu ihe na oghere, na nbuli elu bụ uru ụfọdụ, yabụ enwere mmekọrịta kwesịrị nha anya n'etiti ihe oyiyi na ihe ahụ, enweghị mgbagha ọ bụla.
Otú ọ dị, na usoro ntanetị n'ezie, ebe ọ bụ na njedebe nke ray ray dị iche na mmụba nke oghere ubi ahụ, mmụba ahụ abụghịzi ihe na-eme mgbe niile na ihe oyiyi nke conjugate, ya bụ, mmụba na etiti nke ihe oyiyi ahụ na mmụba ọnụ ya enweghị nkwekọ, ihe oyiyi ahụ tụfuru ihe yiri ya na ihe ahụ. A na-akpọ ntụpọ a nke na-eme ka ihe oyiyi ahụ gbagharịa agbagọ.
2.2 Kedụ ka ịgha ụgha si emetụta izi ezi
Nke mbu, njehie nke AT (Aerial Triangulation) ga-emetụta njehie nke ígwé ojii ahụ dị oke mkpa, wee si otú ahụ pụta njehie nke ụdị 3D. Ya mere, mgbọrọgwụ pụtara square (RMS nke Reprojection Error) bụ otu n'ime ihe ngosi dị mkpa nke na-egosipụta nke ọma igosipụta usoro ikpeazụ nke ziri ezi. Site na ịlele uru RMS, enwere ike ikpe ikpe ziri ezi nke ụdị 3D. Obere uru RMS dị ntakịrị, nke ka zuo oke nke ụdị ahụ.
2.3 Gini bu ihe n’etu ghasasi lens
Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo ya dị
Ke ofụri ofụri, ogologo hiwere isi nke ogologo nke a ofu-elekwasị anya lens, nke nta na-ekpu; na mkpumkpu na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo, ihe ukwuu na-ekpu. Ọ bụ ezie na ngọngọ nke oghere elekere ogologo ogologo elekere anya (tele lens) adịlarị pere mpe, n'eziokwu, iji chebara elu ụgbọ elu na akụkụ ndị ọzọ echiche, ogologo elekere nke oghere igwefoto nyocha ikuku enweghị ike ịbụ ogologo oge.Dịka ọmụmaatụ, eserese na-esote bụ Sony 400mm tele lens. Can pụrụ ịhụ na oghere ahụ na-agbagọghị pere mpe, ọ fọrọ nke nta ka ọ na-achịkwa n’ime 0,5%. Ma nsogbu bụ na ọ bụrụ na ị na-eji oghere a iji nakọta foto na mkpebi nke 1cm, na elu ụgbọ elu adịworị 820m.let drone iji fee na elu a bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya.
Nhazi anya bụ usoro kachasị dị mgbagwoju anya na nke kachasị elu na usoro mmepụta lens, gụnyere opekata mpe usoro 8. The tupu usoro na-agụnye nitrate ihe onwunwe-gbọmgbọm mpịachi-ájá nghọta-egweri, na post-usoro na-ewe isi-mkpuchi-adhesion-ink mkpuchi. Nhazi nhazi na gburugburu ebe obibi na-ekpebi nhazi ikpeazụ nke anya anya anya.
Nhazi nhazi nke obere nwere mmetụta na-egbu egbu na ntụgharị eserese, nke na-eduga na ntughari anya na-enweghị atụ, nke na-enweghị ike ịhazi ma ọ bụ dozie ya, nke ga-emetụta oke ụdị 3D ahụ.
Ọgụgụ 1 na-egosi oghere tịnyịnya n’oge usoro ntinye lens;
Onyonyo nke abuo n’egosiputa na oghere ndia anaghi adi anya n’elu usoro ntinye oghere;
Onyonyo 3 na-egosi nrụnye ziri ezi.
N'okwu atọ ahụ dị n'elu, ụzọ echichi na nke mbụ na ikpe abụọ bụ nzukọ "ezighi ezi", nke ga-ebibi usoro ndozi, na-ebute nsogbu dị iche iche dị ka blurry, ihuenyo na-adịghị mma na mgbasa. Ya mere, nlezianya nkenke njikwa ka chọrọ n'oge nhazi na nzukọ.
Usoro mgbakọ nke mensị
Usoro nkwekọrịta lens na-ezo aka na usoro nke modulu lens niile na ihe mmetụta eserese. Ntọala dịka ọnọdụ nke isi ihe nke nghazi nghazi na mgbagha na-arụ ọrụ na nhazi usoro igwefoto na-akọwa nsogbu ndị kpatara nsogbu nzukọ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike ịnagide obere njehie nzukọ (n'ezie, nke kachasị elu nke nzukọ ahụ, nke ka mma). Ọ bụrụhaala na usoro nhazi ahụ ziri ezi, enwere ike gbakọọ ihe ntụgharị ihe oyiyi n'ụzọ ziri ezi karị, wee wepụ ihe oyiyi ahụ. Omume ọma jijiji nwekwara ike ime ka oghere na-agagharị ntakịrị ma mee ka oghere ntụgharị oghere gbanwee. Nke a bụ ihe kpatara igwefoto nyocha ikuku ikuku iji dozie ma degharịa ya mgbe oge gachara.
2,3 Rainpoo si oblique igwefoto oghere
Ugboro abụọ Gauβ Ọdịdị
Oblique foto nwere ọtụtụ ihe achọrọ maka oghere, ka ọ bụrụ obere nha, ọkụ dị nha, obere onyonyo onyonyo na mmebi nke chromatic, mmegharị nke agba dị elu, na nnukwu mkpebi. Mgbe ị na-emebe oghere lens, lens nke Rainpoo na-eji usoro Gauβ abụọ, dị ka egosiri na ọnụ ọgụgụ ahụ:
Ekewara ihe owuwu ahụ n'ihu lens, diaphragm na azụ nke lens ahụ. Ihu na azụ nwere ike ịpụta dị ka '' symmetrical '' n'ihe gbasara diaphragm ahụ. Ọdịdị dị otú a na-enye ohere ụfọdụ nke abromations nke chromatic emepụtara n'ihu na azụ iji kagbuo ibe ha, yabụ na ọ nwere nnukwu elele na nhazi na nha anya oghere na njedebe oge.
Enyo nke aspheric
Maka igwefoto oblique ejikọtara anya m ise, ọ bụrụ na lens ọ bụla dị okpukpu abụọ, igwefoto ga-adị okpukpu ise; ọ bụrụ na oghere ọ bụla dị okpukpu abụọ n'ogologo, mgbe ahụ igwefoto oblique ga-ọ dịkarịa ala okpukpu abụọ. Ya mere, mgbe ị na-emepụta, iji nweta ọkwa dị elu nke eserese ma hụ na mmebi ahụ na olu pere mpe dị ka o kwere mee, a ga-eji lenses aspheric.
Anya m nwere ike ịmaliteghachi ìhè gbasasịrị site na gburugburu ala ka ọ gbado anya, ọ bụghị naanị nwere ike ịnweta mkpebi dị elu, mee ka ogo mmeputakwa agba dị elu, kamakwa ọ nwere ike mezue mmezi aberration na obere ọnụ ọgụgụ m, belata ọnụ ọgụgụ nke anya iji mee igwefoto dị ọkụ na obere.
Mgbanwe agbagọ teknụzụ
Njehie ahụ na nzukọ nzukọ ga-eme ka oghere dị anya na-enyo enyo. Mbelata njehie nzukọ a bụ usoro mmezi usoro. Ndị na-esonụ ọgụgụ na-egosi na schematic eserese nke tangential distortion nke a oghere. Ke ofụri ofụri, distortion displacement is symmetrical with respect to the lower left —— the right right angle, na-egosi na oghere nwere ntụgharị ntụgharị n'akụkụ n'akụkụ ntụzịaka, nke kpatara mmejọ nzukọ.
Ya mere, iji jide n'aka na nnukwu onyonyo ziri ezi na ịdị mma, Rainpoo emeela usoro nlezianya nyocha na imewe, nhazi na mgbakọ:
Ná mmalite nke imewe, iji hụ na coaxiality nke oghere nzukọ, dị ka o kwere mee iji hụ na ihe niile oghere echichi ụgbọelu na-esichara site onye clamping;
② Na-eji ngwongwo na-atụgharị ihe dị na lathes dị elu iji hụ na nhazi nke ígwè ọrụ ruru ọkwa IT6, karịsịa iji hụ na ndidi coaxiality bụ 0.01mm;
Lens Anya elekere ọ bụla nwere setịpụrụ nke tungsten nchara nkwụnye gauges na gburugburu dị gburugburu (nha ọ bụla nwere opekata mpe ụdị 3 dị iche iche), akụkụ nke ọ bụla na-enyocha nke ọma, na nnabata ọnọdụ dị ka ihe yiri ya na perpendicularity na-achọpụta site -hazi ihe atụ atọ;
FMgbe emepụtara lens ọ bụla, a ga-enyocha ya, gụnyere mkpebi ntule na ule eserese, yana ihe ngosi dị iche iche dịka mkpebi na mmegharị agba nke oghere.
RMS nke anya m Rainpoo tec
RIY igwefoto obliqueRIS igwefoto obliqueRIE ese foto otu anyaNgwa
Nyocha / GISObodo SmartMwube / NgwuputaTourism / Ancient ụlọ nchedoNdị agha / ndị uwe ojii
Akụkọ ụlọ ọrụAkụkọ ụlọ ọrụ
Akụkọ banyere RainpooEbube ebubeMmekọ / Ndị nkesa
Ala nke 14, No.377 Ningbo Road, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan, China
Nkwado mba ofesi ： +8619808149372
Igbe akwụkwọ ozi ： jack@rainpoo.com